Semalt: mampiasa Bots mba hamoronana lahatsoratra Wiki
Michael Brown, Semalt Mpitantana Success Manager, dia milaza fa Wikipedia na Wikipedia ihany no iray amin'ireo tranonkala afaka mirehareha amin'ny fananana lahatsoratra marobe voasoratra amin'ny lohahevitra samihafa. Svenker Johansson, tompon'andraikitra ao amin'ny Oniversiten'i Soeda, dia niaro ny fampiharana lahatsoratra an-tapitrisany maro, nilaza fa nampiasa tamim-pahendrena ny robots sy bots izy ary nahazo azy ireo fankatoavana avy amin'ny manam-pahefana talohan'ny fampiasana azy ireo ao amin'ny Wikipedia.
Namorona lahatsoratra an-tapitrisany tao Wikipedia ny rindramsin'i Johansson, ary izy no iray amin'ireo tonian-dahatsoratry ny rakipahalalana malaza sy malaza. Ankehitriny, io mpampianatra ara-batika io dia fantatra be hoe Lsj. Izy no namorona an'i Lsjbot, tonian-dahatsoratry Wikipedia izay nanampy an'i Svenker hamorona lahatsoratra maro ho an'ny teny Soedoà. Hatreto, Lsjbot dia afaka mamorona lahatsoratra telo tapitrisa amin'ny fiteny samihafa ao amin'ny Wikipedia ary manamboatra mihoatra ny folo tapitrisa amin'ny fanitsiana tsirairay. Johansson dia miteny fa ny tanjona lehibe indrindra dia ny mamorona lahatsoratra momba ny karazana biby sy zavamaniry samihafa. Indray andro nisy botsaka vitsivitsy tao amin'ny Wikipedia, saingy nanambara i Johansson fa mihamitombo hatrany izy ireo amin'izao fotoana izao ary tokony ho anisan'ny tetikasan'i Google sy Wikipedia.
Na izany aza dia misy fetrany ny zavatra azontsika atao amin'ny bots..Mazava ho azy fa manan-danja ny bota satria manampy betsaka amin'ny asa, ary koa manoratra lahatsoratra samihafa ao amin'ny Wikipedia. Ny dikan-teny anglisy dia misy lahatsoratra an-tapitrisany maro, ary ampiasaina hanamboarana ny fandrobana ny bots ireo. Na aiza na aiza manerana an'izao tontolo izao, dia manamboatra sy manavao ireo zavatra taloha izy ireo, ny famandrihana ireo adihevitra efa misy, ny fanovana ny sokajy lahatsoratra ao amin'ny Wikipedia ary ny mampiditra mari-pamantarana marina amin'ny tatitra momba ny olana.
Ny botsa na robots dia mandeha amin'ny alàlan'ny fankatoavana manokana
Nanaiky ihany koa i Moller fa ny tranonkalan'ny Wikipedia sy ny tetikasany dia voatazona amin'ny fomba samihafa, izay manampy amin'ny fampivoarana ny zava-baovao. Ny fampiasana robots sy bots amin'ny fananganana lahatsoratra dia manana ny tsy fahombiazany, fa i Johansson kosa niaro ny fampiharana azy tamin'ny hevitra matanjaka. Nanamarika izy fa manana anarana maherin'ny 150 ao amin'ny The Lord of the Rings ny Wikipedia ny Soeda, fa vitsy ihany no an'ny Vietnam War. Midika izany, ity mpampianatra manan-talenta ity dia namorona ny botsika izay manolo ny mpanoratra sy ny tonia. Avy eo dia miresaka momba an'i Tolkien sy ny fotsy hoditra izy. Mbola sarotra ho an'ny olona tokana izany, fa Johansson kosa mampiasa botsika manokana Wikipedia mba hanatanterahana ny andraikiny amin'ny fomba tsaratsara kokoa Source .